I-infographic: Amacebo amatsha aKhulayo ukuqhubela phambili uLwazi ngeeNtengiso zikaGoogle | Martech Zone
I-infographic: Amacebo amatsha aKhulayo ukuqhubela phambili ukuKhula kweRetail ngeNtengiso zikaGoogle
NgoLwesibini, Matshi 31, 2020 NgoLwesibini, Matshi 31, 2020 Douglas Karr
Kwisifundo sayo sesine sonyaka kwimveliso yentengiso kwintengiso zikaGoogle, Sidecar icebisa ukuba abathengisi be-e-commerce baphinde bacinge ngezicwangciso zabo kwaye bafumane indawo emhlophe. Inkampani ipapashe uphando kuyo Ingxelo yeBenchmarks ye2020: Iintengiso zikaGoogle kuRhwebo, Uphononongo olubanzi malunga nokusebenza kwecandelo lentengiso kwiiNtengiso zikaGoogle.
Iziphumo zeSidecar zibonisa izifundo eziphambili kubathengisi ukuba baqwalasele yonke i-2020, ngakumbi phakathi kobume bendalo obenziwe kukuqhambuka kwe-COVID-19. I-2019 yayinokhuphiswano ngakumbi kunangaphambili, kodwa abathengisi babenakho ukugcina ngempumelelo ingeniso ngokuziqhelanisa nemozulu, bejolise kwisicwangciso sabo sabaphulaphuli, kunye nokubeka phambili ukukhula okunyukayo, ngokuchaseneyo nokunyuka okukhulu. Esi sihlunu sokuziqhelanisa sisitshixo sokugcina amashishini ahamba kwaye axhasa abathengi ngalo lonke eli xesha lokungazinzi.
UMike Farrell, uMlawuli oPhezulu weSicwangciso esiDibeneyo seDijithali eSidecar
Iimpawu eziphambili zoRhwebo lweNtengiso kaGoogle:
I-Sidecar ityhile ezi zinto zilandelayo zichaphazele ukusebenza kwabathengisi kwi-2019:
Utshintsho kuhlahlo-lwabiwo mali -Ukuthengisa kwakhona iintengiso zikaGoogle zichithe kwi-2019, zibeka phambili umsebenzi osezantsi we-Funnel kuGoogle yokuthenga kunye nokubuyisa amaphulo abo okukhangela ahlawulelweyo okonga iindleko.
Ukubekwa phambili ngokubaluleka kokusebenza kakuhle Abathengisi bagxininise ukusebenza ngokukuko kukhangelo oluhlawulelweyo, ngokuyinxenye ngokutyala imali kwiintengiso ezingabizi kakhulu, eziya kukhokelela kwingeniso efanayo kunyaka ophelileyo.
Ukhuphiswano oluvela kwiAmazon - Olu khuphiswano lwehlise amaxabiso okuguqula ukuthengwa kweGoogle kwizixhobo zonke, kunyanzelwa abathengisi ukuba basebenzise imali ukugcina ukukhula kwemali.
Ugxininiso kwisicwangciso sabaphulaphuli - Abathengisi bonyuse ukujolisa kwabo kubaphulaphuli begranular ngakumbi ekujoliseni kwiimephu zeNtengiso zikaGoogle kuwo onke amabakala okuthenga.
Ingqwalaselo engagungqiyo kuGoogle - Abathengisi bagcina ingeniso kwiqonga leentengiso zikaGoogle ezinde, kwaye bafuna izibonelelo ezongezelelweyo ngokusebenzisa amaqonga entengiso amatsha, anje ngeAmazon nePinterest.
Ukujonga phambili, uGoogle uqinisekile ngokuqhubeka nokubumba iqonga lezentengiso zikaGoogle ukukhuphisana namaqonga entengiso akhulayo nokhuphiswano anje ngeFacebook, Instagram kunye neAmazon.
Iziphumo eziphambili zeNtengiso yeGoogle yeNtengiso yeBenchmark:
Abathengisi benyuka baya kumceli mngeni wokukhuphisana. Abathengisi bakhule ngokukuko ngakumbi ekukhangekeni okuhlawulelweyo, konga iipesenti ezisi-8 kwiindleko zonyaka, ngelixa beqhuba ingeniso efanayo. Abathengisi bakwazile ukukhawulela ingeniso yokuthenga kaGoogle nge-7% nge-7% yokunyuka kwenkcitho.
Inkcitho yomthengisi ithengisiwe. Ukuthenga kuGoogle kwenziwe iipesenti ezingama-80 zebhajethi yabathengisi phakathi kwezi ziteshi zimbini, njengoko idlala indima ekhulayo ekuguqulweni kwabathengi abaphantsi. Ngelixa ukukhangela okuhlawulelweyo kubandakanya i-20% eseleyo yenkcitho, abathengisi basondela kwezi ntengiso ngegranularity enkulu ngokufanelekileyo ukutsala abathengi ngaphezulu kwefaneli.
Isabelo sokuthengwa kukaGoogle kuAmazon sifike kwi-60% ye-B2B, indlu kunye nekhaya, kunye nokuthengisa ngokuthe gabalala kwi-Q3 2019. Isabelo sokubonwa kweAmazon sinqabile kancinane kwi-Q4, ivumela abathengisi ukuba baphinde babuyise ukubonakaliswa kwabo ngexesha elinzima lonyaka.
Isabelo sokubonisa seAmazon sihambile kancinane kukhangelo oluhlawulelweyo ngo-2019, sijikeleza malunga neepesenti ezingama-40 okanye ezantsi kubo bonke abathengisi abahlalutyiweyo. Abathengisi kwezempilo kunye nobuhle kunye nendlu kunye nokuma nkqo ekhaya babone ukwehla kwesabelo seAmazon malunga neepesenti ezisi-7 ukuya kwezisi-8 kumacandelo abo ngo-2019. Ezi ziphumo zibonisa ukuba ukukhangela okuhlawulelweyo kunokuba sisixhobo esibalulekileyo kubathengisi ukuze bakwazi ukujongana neAmazon nabanye abakhuphisana nabo ' ubukho kwi-SERP ehlawulwayo.
Inkulumbuso ibonelela abathengisi ngamathuba amatsha kwiintengiso zikaGoogle. Ukukhula konyaka-ngaphezulu konyaka kubonwe kwimbonakalo kunye nengeniso kwizixhobo ngeveki epheleleyo yoSuku lweNtloko kuVenkile kuGoogle. Kwiintengiso zentengiso kwiselfowuni, bekukho ukukhula konyaka-ngaphezulu konyaka kwii-KPIs eziphambili (4% yeeodolo, 6% konqakrazo, kunye ne-13% yengeniso). Ukongeza, ukukhangela okuhlawulelweyo kwintengiso eziphathwayo kuye kwabona ukuzuza okubonakalayo kukonyuka kwama-25% kwii-odolo kunye nama-28% kunyaka wengeniso ngaphezulu konyaka.
Fikelela kwingxelo epheleleyo kwaye unokufumana ii-KPIs zakho ngokuthe nkqo kwintengiso, kubandakanya neendlela eziphambili ezichaphazela imeko yokuthengisa kunye neengcebiso zikaSidecar.
Khuphela iNgxelo yeBenchmarks ye-Sidecar ye-2020
I-Sidecar ibonelela ngokugqwesa kokusebenza kwintengiso kubathengisi nakwiimpawu. Itekhnoloji esembindini ye-Sidecar kunye nedatha yobunini, edityaniswa neminyaka yokuthengisa kwintsebenzo, inceda abathengi bayo ukuba bavule amandla ophando, ezentengiso, ezentlalontle kunye neendawo zentengiso.
tags: 2020AmazonIimpahla zentengisouphawu lokulinganisaingxelo yomgangathoiintengiso zekhompyuthai-covid-19khuphela ingxeloiintengiso zeziphoiintengiso zikaGoogleIintengiso zikaGoogle kwintengisogoogle adwordsUkuthenga kuGoogleIintengiso zokuzonwabisaiintengiso eziphathwayoukukhangela okuhlawulelweyopdfiintengiso zezindluIngxelo yokuthengisa yomgangathoIintengiso zikaGoogle
Douglas Karr Tuesday, March 31, 2020 Tuesday, March 31, 2020
Ukuqhambuka kwe-COVID-19: Impembelelo yeNtengiso kunye neNtengiso
Bazi njani abaThengi bakho beB2B ngokuFunda ngomatshini